Ny rakikira manaraka an'i Drake 'Fijery avy amin'ny 6' ho an'ny mozika Apple | Avy amin'ny mac aho
Ny rakikiran'i Drake ho avy 'Views From the 6' ho avy irery amin'ny Apple Music
Misaotra ny Internet, mahazatra ny exclusives amin'izao fotoana izao. Aiza ny farany tsy misy farany dia ny rakikira manaraka nataon'i Drake. Nambara fa ny mpanakanto malaza Drake, hamoaka ny rakikirany manaraka mitondra ny lohateny 'Views avy amin'ny 6', toy ny natokana ho an'ny Apple Music. Avy amin'ny tranonkala ny fanamafisana 'Pitchfork', izay nanamafisan'i Apple fa hamoaka amin'ny alalàn'ny Apple Music ny rakikira vaovao ho an'ny 29 aprily.
Tsara ny manamarika izany tsy misy fampahalalana momba ny faharetan'ny exclusivity. Ity exclusivity miaraka amin'ny famoahana ny rakikira ity dia mety tsy dia mahagaga loatra, raha jerena fa ho tokana avy amin'ny rakikira manaraka. 'Dihy iray', izay amin'ny tenany ihany dia havoaka amin'ny Apple Music.
Drake dia manana fifandraisana tafaray amin'i Apple amin'izao fotoana izao, izay nisehoan'ny mpanakanto an-tsehatra nandritra ny fampisehoana voalohany ny Apple Music araka ny hitanao amin'ny horonantsary napetrantsika etsy ambony. na dia Apple nanome vola ampahany lehibe tamin'ny horonan-tsary 'Hotline Bling'.
Araka ny efa nolazainay tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity dia hivoaka amin'ny Apple Music ity rakikira ity April 29. Drake dia nizara hira vaovao maromaro tamin'ny taona 2016. Tamin'ny volana Janoary, izy no voalohany 'Fahavalo ambin'ny folo fahavaratra' en 'Radio OVO Sound'. Ankoatry ny 'Style pop', namoaka hira vaovao iray hafa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, 'Dance iray'.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny rakikiran'i Drake ho avy 'Views From the 6' ho avy irery amin'ny Apple Music
Manemotra ny fisokafana ny Ivotoerana fikarohana sy fampandrosoana any Japon
Manohy mahazo ny tsena ny Mac raha oharina amin'ny PC